YEYINTNGE(CANADA): Friday, March 08
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/08/20130အကြံပြုခြင်း
ထိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ ဖိလစ်ပိုင် တောင်ပိုင်းက ဒေသတွေဟာ မလေးရှားအပိုင်တွေပါလို့ ကြွေးကျော်ခဲ့ကြပီး မသိမသာကော သိသိသာသာပါ ထောက်ပံ့ စွက်ဖက်နေတဲ့ မလေးရှားအတွက် မိုရိုတို့ ဆာဘားကျွန်းကို သူတို့ဘိုးဘွားတွေရဲ့အပိုင်လို့ ကြွေးကျော်ပီး သိမ်းပိုက်ဖို့ ကြံစည်တာကို ခံလိုက်ရတာဟာ အရှိုက်ကို ထိုးနှက်ခံလိုက်ရသလို ဖြစ်သွားတာပါပဲ….. အခြားသူများကို လူသားခြင်းစာနာမှု လူ့အခွင့်အရေး အစရှိတာတွေကို တွင်တွင်အော်တဲ့ မလေးရှားအစိုးရ သူစိုက်ပျိုးတဲ့ အသီးအပွင့်ကို သူစားသုံးရချိန်မှာတော့ ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ပဲ လေယာဉ်နဲ့ ဗုံးကျဲ မော်တာနဲ့ထုလို့ အသည်းအသန် ဖြေရှင်းရတော့တာပါပဲ…….
ထိုင်းတောင်ပိုင်းက အကြမ်းဖက် ဖြစ်ရပ်တွေကို ထောက်ခံခဲ့တဲ့လူတွေ၊ ဖိလစ်ပိုင် မိုရိုတွေဟာ သူတို့လွတ်လပ်ရေးအတွက် ကြိုးပန်းတာ ဟိုးဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် ကတည်းက နေလာတာလို့ လော်ဘီလုပ်ခဲ့သူတွေဟာ မလေးရှား ဖြစ်ရပ်မှာတော့ အာစေးထည့်ထားသလို ဆွံ့အလို့နေပါတယ်….. ထိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ ဖိလစ်ပိုင် တောင်ပိုင်းတို့ဟာ မလေးတို့အရင်ကတည်းက နေထိုင်လာတဲ့အတွက် မလေးတို့ ရသင့်တယ်လို့ တွင်တွင်ကြွေးကျော်ရင်း ဘင်္ဂါလီတွေဟာ ရခိုင်မှာ အရင်ကတည်းက နေလာတာလို့ လော်ဘီလုပ်နေသူတွေလည်း အခုကိစ္စမှာ ပါးစပ်ပိတ်နေကြပါတယ်…. တစ်ခုခုဆိုရင် အမြဲလိုလို ရှေ့တန်းက ပါလေ့ရှိတဲ့ OIC လည်း အခုကိစ္စမှာ သူ့လူအချင်းချင်း ဖြစ်လေတော့ ၀င်ရောက် ဖြန်ဖြေခြင်း၊ ကျေအေးခြင်းတောင် လုပ်နိုင်စွမ်း မရှိတာ ပေါ်နေပါတယ်….
အခုဖြစ်ရပ်မှာ တရားသည် မတရားသည် ဆိုတာထက် စစ်နိုင်သူက သမိုင်းကို ပြင်ယူသည်ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း မိုရိုတို့ ကျင့်သုံးဖို့ ကြိုးစားလာတာ တွေ့ရပါတယ်….. ပထမဦးဆုံး သူ့လူ အယောက် ၂၀၀ လောက်ကို လက်နက်အပြည့်အစုံ တပ်ဆင်ပီးတော့မှ ဆာဘားကျွန်းစုဘက်ကို လွှတ်လိုက်တာပါပဲ…… အဲ့ဒါတွေကြောင့် မလေး ဒေသန္တရတပ်တွေ မခံနိုင်တော့လို့ လေတပ်က အသည်းအသန် ပစ်ကူပေး၊ ဗုံးကျဲရတဲ့အထိ အခြေအနေကို ရောက်ခဲ့ရတာပါ…… မလေးတပ်သာ အရောက်နောက်ကျပီး မိုရိုတပ်တွေ သိမ်းပိုက်နိုင်သွားရင် ဖြစ်ရပ်က တစ်မျိုးပြောင်းလဲ သွားနိုင်ပါတယ်…… အရင် မိုရိုတို့ ဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် တောင်းခဲ့စဉ်က မလေးအစိုးရ ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေနဲ့ သူ့ကို ပြန်ချည်သွားရင် ငါးပါးမှောက်မှာပါ…..
မိုရိုအဖွဲ့က အီဘရာဟမ်ကတော့ သူ့လူတွေဟာ လုံးဝလက်နက်မချဘူး၊ ဗုံးကျဲတာလည်း မသေပဲ လွတ်သွားတယ်လို့ ဆိုလာပါတယ်…. သူနဲ့ အဲ့ဒိကို တိုက်ဖို့သွားတဲ့အဖွဲ့က ကီရမ် ညီအစ်ကိုတွေနဲ့ ဖုန်းပြောခဲ့တုန်းက အားလုံး အခြေအနေကောင်းတယ်လို့ သူသိရပါတယ်တဲ့…. သူတို့ကို ဗုံးကျဲဖို့ လာတာကို သူတို့နိုးနိုးကြားကြား ရှိနေလို့ ရှောင်နိုင်တယ်….. အခုလို နေရာမှာ နိုးနိုးကြားကြား ရှိမနေပဲ ဘယ်လိုသွားတိုက်မလဲလို့ ဆိုလာပါတယ်….. နောက်ဆုံး တစ်ယောက်ကျန်တဲ့အထိ သူတို့ ဘိုးဘေးတွေ နေခဲ့တဲ့ နေရာကို ရအောင်ယူမယ်လို့လည်း ကြွေးကျော်ခဲ့ပါတယ်…. လိုအပ်ရင် စစ်ကူတွေထပ်လွှတ်ဖို့လည်း အဆင်သင့်လို့ ဆိုပါတယ်…. အဲဒိအချိန်မှာ ဘန်ကီမွန်းက သူ့ထုံးစံအတိုင်း အချင်းချင်း ပြေပြေလည်လည် ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းလုပ်ဖို့ ပြောလိုက်ချိန်မှာ မိုရိုတို့ အကြီးအကဲက အထာနပ်စွာပဲ အပစ်အခတ် ရပ်ဆဲရအောင်လို့ လေသံပစ်လာပါတယ်…….. တစ်လက်စတည်းမှာ မလေးတို့အနေနဲ့ အဆိုပါဒေသတွေအတွက် ငှားရမ်းခ သူတို့ကို ပေးသင့်တယ်လို့ အသံတွေ ထွက်လာပါတယ်……
မလေး ၀န်ကြီးချုပ် နာဂျစ်ကတော့ သူတို့မွေးထားတဲ့ မျောက်ရဲ့ အထာကို နပ်ပုံရပါတယ်…… အပစ်အခတ် ရပ်ဆဲတာကို လုံးဝလက်မခံဘူးလို့ ခပ်ပြတ်ပြတ်ပဲ ဆိုလိုက်ပါတယ်….. အဲ့ဒိ ကျူးကျော်မှုဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဒေသကို ရောက်တုံးမှာပဲ သူပုန်တွေဟာ ချွင်းချက်မရှိ လက်နက်ချရမှာကိုပဲ ငါတို့အလိုရှိတယ်လို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောလိုက်ပါတယ်….. လုံးဝ လက်နက်မချရင်တော့ ဘယ်လောက်ပဲ ကြာပါစေ လုံးဝကို အပြတ်ရှင်းပစ်မယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်….. လက်နက်မချပဲ ငြိမ်းချမ်းရေး ယူလိုက်ခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်တွေဖြစ်တဲ့ အခြားတစ်ဖက်က စစ်ကူတွေ မလိမ့်တပါတ် ဖြည့်တင်းလာခြင်း၊ ယခု အသာစီးရနေတဲ့ စစ်ရေးအရှိန်ကို လျော့ကျသွားမှာကို စိုးရိမ်တဲ့အတွက်လည်း ပါဝင်ပုံ ရပါတယ်…..
နာဂျစ်ကတော့ ပြည်သူလူထုမှတောင်းဆိုသော နိုင်ငံတော်၏ ဂုဏ်၊ အချုပ်အခြာအာဏာကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အစိုးရအနေဖြင့် လိုအပ်သည်များကို အရေးယူမှု ဆောင်ရွက်မှုများကို လုပ်ဆောင်သွားရမယ်လို့ ခပ်ပြတ်ပြတ်ပဲ ပြောလိုက်ပါတယ်…… သူပြောခဲ့တဲ့ စကား အပြည့်အစုံကတော့ “The government has to take the appropriate action to protect national pride and sovereignty as our people have demanded.” လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်….. အခုလက်ရှိမှာတော့ မလေးအစိုးရအနေနဲ့ ဆာဘား ဒေသမှာ တစ်အိမ်တစ်ဆင်းကို အဲ့ဒိ ကျူးကျော်သူ လက်နက်ကိုင်တွေကို လိုက်လံရှင်းလင်းနေတာ ဒီနေ့အထိ နောက်ထပ် ရှင်းလင်းခဲ့တာ ၃၁ ယောက်ရှိပီး အကြမ်းဖက် ဖြစ်ရပ် စဖြစ်ခဲ့ချိန်မှာ ၁၉ ယောက်ကို ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်……… အချို့သောသူများကတော့ အဆိုပါ ရှင်းလင်းခဲ့သူများထဲမှ အများစုဟာ တိုက်ပွဲအတွင်း သေဆုံးခြင်းလား၊ လက်နက်ချပီးမှ အသတ်ခံရခြင်းလား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရှိရဘူးလို့ ဆိုပါတယ်…….
အခုဖြစ်ရပ်ဟာ မလေးနိုင်ငံပိုင် ဆာဘားကျွန်းကို ဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းက ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသက တော်ဝင် ဆူလူးတပ်မတော်လို့ သူတို့ကို သူတို့သုံးနှုံးထားတဲ့ မိုရိုလက်နက်ကိုင် အုပ်စုက ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ဖို့ ကျိုးစားတာ ဖြစ်ပေမယ့်လည်း မီဒီယာတွေပေါ် ရောက်သွားချိန်မှာတော့ မလေးရှားနဲ့ ဖိလစ်ပိုင် ဖြစ်သွားပါတယ်….. မော်ရိုတို့ကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ဒေသအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလိုက်ရတဲ့ ဖိလစ်ပိုင် အစိုးရလည်း ဒီကိစ္စမှာ ပဠိပက္ခ အမြန်ဆုံး ရပ်ဆဲသွားဖို့ ဖိအားပေး ခံနေရပါတယ်…… ဖိလစ်ပိုင် သမ္မတ ပြောရေးဆိုခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် ရစ်ကီကတော့ မလေးရှားမှာ ရောက်နေစဉ်အတွင်း ပြောဆိုခဲ့တာကတော့ ဒီဖြစ်ရပ်တွေကို ရှောင်ကျဉ်နိုင်ဖို့ ငါတို့ဘက်က လုပ်နိုင်သလောက် လုပ်ပီးသွားပီ၊ ဒါပေမယ့် အဆုံးသတ်ကတော့ ကီရန်ရဲ့ လူတွေက သူတို့လမ်းကို သူတို့ရွေးနေတာပဲ လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်…. ဖိလစ်ပိုင် သမ္မတ အကွီနိုကလည်း မိုရိုတို့ ခေါင်းဆောင် ဂျမာလူးကို အပြစ်ပေးချင်တယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောလာပါတယ်…….
အခုဖြစ်ရပ်ကို သုံးသပ်ကြည့်ရင်တော့ ကိုယ်မွေးတဲ့မျောက် ကိုယ်ပြန်ချောက်ခံရတဲ့ မလေးရှားဟာ သူကိုယ်တိုင် မီးခဲကိုင်မိချိန်မှာတော့ ဘယ်သူ့မျက်နှာမှ မထောက်တော့ပဲ ချွင်းချက်မရှိ လက်နက်ချ၊ မချရင် အပြုတ်တိုက်မယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောလာတဲ့အပြင် သူ့နိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်၊ အချုပ်အခြာ အာဏာကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အရေးယူမှု မှန်သမျှ လုပ်သွားမယ်လို့ကို ခပ်ပြတ်ပြတ်ပဲ ဆိုလာပါတယ်….. မလေး သတင်းတွေကလည်း ဆာဘားကို တရားမ၀င် ကျူးကျော်လာသူတွေဟာ မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ လုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်နေပီလို့ တညီတညွတ်တည်း ထွက်ဆိုလာကြပါတယ်…… ဒါတွေကို သင်ခန်းစာယူရင်း ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအနေနဲ့လည်း ကျူးကျော်သူ စစ်တကောင်းသား ဘင်္ဂါလီ ခေါ်တောများနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ခပ်ပြတ်ပြတ် ဖြေရှင်းဖို့ လိုနေပီဆိုတာ မိုရိုတို့ အခြေပြု စတင်ခဲ့သည်မှသည် အခုလုပ်ရပ်တွေကို ကြည့်ရင်း သင်ခန်းစာယူဖို့လိုပီလို့ပဲ ဆိုပါရစေ……
မြောက်ကိုရီးယားမှ တောင်ကိုရီးယားနှင့် စစ်ရပ်ဆိုင်းရေးစာချုပ်အားလုံး ဖျက်သိမ်း၊ မြို့တော်ဆိုးလ်နှင့် အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရေး တယ်လီဖုန်းလိုင်းများကို ဖြတ်တောက်
အကယ်၍ မိမိတို့ နိုင်ငံကို နျူကလီးယား လက်နက်ဖြင့် တိုက်ခိုက်မည် ဆိုပါက မြောက်ကိုရီးယားဆိုသော နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အပြီးတိုင် ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည် တောင်ကိုရီးယား ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားလိုက်သည်။ ကုလသမဂ္ဂက မြောက်ကိုရီးယား၏ နျူကလီးယားလက်နက် စမ်းသပ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပိတ်ပင်တားဆီးမှု အသစ်များ ပြုလုပ်ခဲ့သည့်နောက် မြောက်ကိုရီးယားက မိမိတို့နှင့် တောင်ကိုရီးယားတို့ကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ကာလများ ပြီးဆုံးသွားနိုင်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
ကိုရီးယား ကျွန်းဆွယ် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာက ထင်မြင်ချက် အမျိုးမျိုးနှင့် စောင့်ကြည့်နေချိန်တွင် တောင်ကိုရီးယား ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရ အရာရှိ ကင်မ်မင်ဆွတ်ခ်က "လူသားမျိုးနွယ်ဝင် တစ်ယောက် အနေနဲ့ ကျွန်တော် ပြောနိုင်တာကတော့ မြောက်ကိုရီးယားဘက်က ကျွန်တော်တို့ကို နျူကလီးယားနဲ့ တိုက်မယ်ဆိုရင် ကင်မ်ဂျုံအန်း အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံဟာလည်း ကမ္ဘာမြေပေါ်က အပြီးတိုင် ပျောက်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ လူသားဆန်မှုရဲ့ အလိုတော်အရပဲ"ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
မြောက်ကိုရီယားက မိမိတို့သည် ရန်မလိုရေး နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူထားမှုအတွက် တောင်ကိုရီးယားနှင့် ဆက်လက် လက်တွဲရန် ဆန္ဒမရှိတော့ကြောင်း ပိတ်ဆို့မှုအသစ် ကြေညာချက် အပြီးတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ လတ်တလောတွင် ကုလသမဂ္ဂသည် မြောက်ကိုရီးယား၏ ကုန်တင်သင်္ဘောနှင့် ကုန်တင် လေယာဉ်များကို စိတ်တိုင်းကျ စီစစ်ခွင့်အပြင် အခြားပိုမိုတင်းကျပ်သည့် ပိတ်ဆို့ တားမြစ်မှုများကို ကုလသမဂ္ဂက ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို (၁၅)နိုင်ငံပါ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီက ချမှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ဒီဇင်ဘာလက မြောက်ကိုရီးယား၏ အရဲကိုးသော ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ် စမ်းသပ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး နောက်ဆက်တွဲ အရေးယူ ဆွေးနွေးမှုများ၏ ရလဒ်ဖြစ်ပြီး မြောက်ကိုရီးယားက နျူကလီးယားလက်နက် စမ်းသပ်လိုက်ရာတွင်မူ ပိတ်ဆို့မှုကို ရှောင်လွှဲရန် ပိုမို ခက်ခဲသွားခဲ့သည်။
၉၆၉ လက်ပတ်များပတ်ပြီး ရမ်းကားနေသူများတွေ့ရှိပါကဂန္တ၀ါစကအဖွဲ့သို့ ဆက်သွယ်ပါ
ယောကျာ်းလေး ၃ ယောက်နဲ့ မိန်းကလေး ၂ ယောက်ခန့်သည် ၉၆၉ လက်ပတ်များပတ်ပြီး ကြိုတင်စည်းဝါးရိုက်ထားသော ကုလားဆိုင်များတွင် ဈေးဝယ်ချင်ယောင်ဆောင်နေသော မြန်မာများနှင့်ကုလားများအား ကုလားဆိုင်တွင် ဈေးမ၀ယ်ရန်
ပြောဆိုနေကြပါသည်။ ထိုသို့ ပြောဆိုနေစဉ်အတွင်း ကုလားဆိုင်များမှ CCTV များဖြင့် ရိုက်ယူထားပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ ၉၆၉ ဆောင်၇ွက်နေသူများသည် ငြိမ်းချမ်းစွာ လုပ်ဆောင်နေကြ သူများ ဖြစ်ပြီး ထိုသို့ ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ခြင်းလုံးဝမရှိပါ။
ထိုသို့ ၉၆၉ လက်ပတ်များပတ်ပြီး ရမ်းကားနေသူများတွေ့ရှိပါကလည်း ပြည်သူများအနေဖြင့် ဖုန်းနံပါတ် ဂန္တ၀ါစကအဖွဲ့
၀၉၄၂၁၁၄၆၅၃၄ သို့ ဆက်သွယ်သတင်းပေးကြပါရန် လေးစားစွာ ဖြင့် မေတ္တာရပ်ခံ အပ်ပါသည်ခင်ဗျာ။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/08/2013 1 အကြံပြုခြင်း